တရားသူကြီးအိပ်မက် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » တရားသူကြီးအိပ်မက်
Posted by myohtat on Oct 23, 2011 in Copy/Paste | 13 comments
တရားသူကြီး လုပ်စားလာတာ ကြာပြီ … ညကမက်တဲ့ အိပ်မက်မျိုး တစ်ခါမှမမက်ဘူးဘူး …
ကျုပ်အိပ်မက်က .. ဒီလိုဗျ … ကျုပ်က တရားရုံးမှာအမှု့တစ်ခုကိုစီရင်ရတယ်ဗျာ .. တရားလို တရားခံနဲ့
သက်သေတွေရှေ့မှာ … ကျုပ်ထိုင်တဲ့စားပွဲရှေ့က အ၀တ်စနီလေးနဲ့ပတ်ထားတဲ့ ကျမ်းကျိန်လွှာကိုကျုပ်ကကောက်ကိုင်ပြီး …
ကျွန်ုပ်စစ်ဆေးနေသောအမှု့နှင့်ပါတ်သက်ပြီး ကျွန်ုပ်သည် … မှန်ကန်စွာဖြင့် တရားမျှတစွာအဆုံးအဖြတ်ပေးပါမည် …
မမှန်မကန်ဆုံးဖြတ်ပါက ကျမ်းစာတွင်ပါသော ဘေးဆိုးရန်ဆိုးမှန်သမျှတို့သည် … အကျွန်ုပ်အား ကျရောက်ပါစေသား …
တရားသဖြင့်မှန်ကန်စွာ အဆုံးအဖြတ်ပေးပါက … ကျမ်းစာတွင်ပါဝင်သော … ကောင်းကျိုးချမ်းသာမှန်သမျှတို့သည် ရပါစေသား …
ကျုပ် .. အိပ်ယာကနေလန့်နိုးသွားတယ် .. တရားသူကြီးကကျမ်းကျိန်ရတယ်ဆိုတာ အစဉ်အလာမှမရှိတာဗျာ …
ပေါက်ပေါက်ရှာရှာကိုမက်တဲ့အိပ်မက် .. ကျုပ်တို့တရားသူကြီးတွေဆိုတာ ဥပဒေကို လက်တစ်လုံးခြားလုပ်ပြီး …ကိုယ်ကြိုက်သလို
စီရင်ချက်ချနိုင်တာဘဲ … ဒါပေမဲ့ … ကျမ်းစာတော့ကျုပ်မကျိန်ရဲဘူး … ဘာ့ကြောင့်ကျမ်းမကျိန်ရဲတာလဲလို့ .. ခင်ဗျားတို့ကမေးရင် …
ကျမ်းစာထဲမှာရေးထားတာတွေကတော်တော်ကြောက်စရာကောင်းတယ် … ကျုပ်တို့က မြန်မာလူမျိုးလေ .. မယုံလို့မရဘူး …
ကျုပ်တို့ မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ရေးမှာ … ကျမ်းကျိန်ပြီး အမှု့စစ်ရဲတဲ့ တရားသူကြီးမျိုးများရှိရင်တွေ့ချင်လိုက်တာဗျာ …
ခင်ဗျားတို့ကော တရားသူကြီးဆိုရင် … ကျမ်းစာကျိန်ပြီး …. အမှု့စစ်ရဲလား ….
တခါက ကိုယ့်ဆီက ငွေယူသွားပြီး ပြန်မပေးလို့ (ငွေပေးတာလည်း အခိုင်အမာ စာချုပ်ရှိပါလျှက်နဲ့) တရားစွဲတော့ စစ်ဆေးခံရတယ်။ အစစ်ခံဖို့ ကျမ်းကျိန်ရတဲ့အချိန်မှာ “ငါလည်း အမှန်အတိုင်းအစစ်ခံမယ်။ နင်လည်း အမှန်အတိုင်း စီရင်ချက်ချ၊ မမှန်မကန်ဆုံးဖြတ်ရင် ကျမ်းစူးပါစေသား” လို့ စိတ်ထဲက ပြောလိုက်တယ်။
ခုတိုင်းဆို ကိုယ့်လို လူတွေ များနေပြီထင်တယ်။ တရားသူကြီးတွေရော တရားရုံးနဲ့ ပတ်သက်နေသူတွေအားလုံးကို ကျမ်းကျိန်ပြီးမှ အလုပ်လုပ်ခိုင်းရင်ကောင်းမယ်။
အိပ်မက်ရှင် တရားသူကြီး ဆရာထက် ပြောပြပါလားဗျ
ကျုပ်တို့ အဝေရာ မှီဝဲတဲ့သူတွေ ငါးပါးသီလ ဆောက်တည် သလို နေမှာပေါ့
သူရာမေရာယ နေရာကြရင် ၊ မဆိုပဲ နေလိုက်သလိုမျိုး
အဲဒီ ကျမ်းထဲမှာ ဘာတွေ ရေးထားတာလဲ ဟင် တခါမှ မဖတ်ဘူးသေးဘူး။
ကောင်းမှုလုပ်ရင် ရေစက်ချစရာတောင်မလိုပါဘူး ကောင်းကျိုးပေးမှာပါ
ကျိမ်ကျိမ် မကျိမ်ကျိမ် မကောင်းမှုလုပ်ရင် မကောင်းကျိုး ခံစားရမှာပါပဲ.
မမှန်မကန် လုပ်ရင်လဲ ဘယ်လောက်ပဲ ကျမ်းရှူးပါစေ ဘယ်လောက်ပြောပြော စူးကို စူးမှာပဲ …
ဒါပေမယ့် မျိုးထက်ရဲ့ အတွေးလေးကတော့ တရားသူကြီးတွေကို အသိတရားရစေမယ်ထင်တယ် …
တရားသူကြီးက လူလိမ်ကိုအမှုစစ်တာ သူကလိမ်ပြီးစွဲချက်တင်ဖို့ ဖိအားပေးခံထားရရင်
အင်း (ဆရာကြီးမောင်သာရရေ ဟတ်ပီးဘာဒ်ဒေးအော်ရင်းနဲ့ခနငှါးပါရစေခင်ဗျာ)
” စက်ကူနှလုံးနဲ့ လူ”
ပေါင်ချိန်အတုတွေကို ကျားခေါင်းဒါးစက်ထဲ ထည့်မလို့လား
ကျားခေါင်း ဓါးစက်နဲ့ ကော တန်ပါ့မလား …။ ဟိုကလက်မခံရင် စုတ်ခ…။
ကျနော်ကြားဖူးတာ တရားရုံးတွေမှာ ကျိန်ခိုင်းတဲ့ကျမ်းက အလွတ်ကြီး၊ သေတ္တာနဲ့ထည့်ထားရင်လဲ အထဲမှာ ကျမ်းမရှိ၊ ဒါမှမဟုတ် အခြားစာအုပ်တအုပ် ထည့်ထားတယ်တဲ့။ တရားရုံးနဲ့ ပတ်သက်နေသူတွေ အပြစ်မဖြစ်အောင် လုပ်ပေးထားတယ် ပြောတယ်။ တရားဝင်တော့ မဟုတ်ဘူးပေါ့။
ကိုကြောင်ကြီး ပြောသလို ပဲ ဖြစ်ရမယ်
တစ်ကယ့် ကျမ်းအစစ် ကို တော့
ကျမ်းစူးပါစေသားလို့ တိုင်ပေးရင် ကျမ်းရှုးပါစေသားလို့ လိုက်ဆိုကြတယ်လို့ ကြားဖူးထားတာ၊
ဘေးဆိုးရန်ဆိုးမှန်သမျှတို့သည် … အကျွန်ုပ်အား ကျရောက်ပါစေသား …လို့ဆိုတော့
ဘေးဆိုးရန်ဆိုးမှန်သမျှတို့သည် … အကျွန်ုပ်အား ကျပျောက်ပါစေသား ဝါးတားတား နဲ့ အော်ရမှာပေ့ါ။
အားတော့နာပါတယ်နော် ..ကျွန်မက တရားသူကြီးဆိုလျှင် ကြည့်မရဘူး .. (ဘာအညှိုးမှတော့မရှိဘူးနော် )
လိပ်ကို ကြမ်းပိုးဖြစ်အောင် ပြောတတ်တာရယ် ၊ ငိုးစား ရယ်စား ရယ်တွေကြောင့် …
တစ်ခါတစ်လေ …. မှားမှန်းသိလျှက် … သူလိုက်တဲ့အမှုနိုင်အောင် ကလီကမာပြောရတာလည်းရှိသေးတယ် .. ။ အင်းလေ… အလုပ်သဘောအရ … မှန်နေလျှင်လည်း သူများ မကောင်းကြံရနိုင်တာမို့ … သူ့အလုပ်သူ တယ်လို့ပဲ တွေးပြီး … နေပါတော့တယ် … ။
ဥပဒေဘက်တော်သားဆို ပိုဆိုးသေး… သူတို့ကို နာမည်ပြောင် ဆွဲချလို့လည်းခေါ်တယ် … ။ အပြစ်မကျကျအောင် ဆွဲချတဲ့ လူဆိုလားပဲ … ။ ကိုယ့်ကြောင့် သူတပါး စိတ်ညစ်ရတာ မကောင်းပါဘူး … ။ အင်း …သူလည်း သူ့အလုပ်သူလုပ်တာပဲကိုး … ။